Ny lalao efitrano fandosirana 24 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny lalao fitsoahana 24 tsara indrindra ho an'ny Android
Eder Ferreño | | Lalao Android
Azo antoka fa maro aminareo no nahatsikaritra fa ilay antsoina hoe "efitrano fandosirana" dia lasa lamaody be. Izany koa dia mitondra any amin'ny tontolon'ny lalao, izay ahitantsika lalao lehibe fandosirana. Ao amin'izy ireo dia mila mandositra ny efitrano na habaka izay voafandrika isika. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mahazo ny fahaizantsika tsara indrindra isika. Ary ireo karazana lalao ireo dia tonga amin'ny Android.
Raha ny marina dia mahita safidy lehibe amin'ity karazana lalao ity isika ao amin'ny Play Store ankehitriny. Noho izany, mitondra anao izahay fifantenana ny lalao fandosirana tsara indrindra ho an'ny Android. Ka raha tianao io karazana io dia hahita ny lalao mahaliana indrindra ianao.
1 Cube Escape Collection
3 Azonao atao ve ny mandositra - Titanic
4 Varavarana ankamantatra 100 - Fialana amin'ny efitrano
5 Misterin'ny Escape Adventure
6 Lavitra 4: fandosirana taloha
8 Izay sisa rehetra: Fizarana 1
9 Fandosirana vahiny
10 The Cube mekanika: Ny fandosirana
11 Ny tranon'ny Da Vinci
12 Lavitra 3: Fandosirana arika
13 Rime - Lalao Escape
14 Mandosira ny trano be
15 Fialana ankamantatra amin'ny efitrano fandosirana: Lalao mieritreritra amin'ny teny espaniola
16 Lalao afa-mandositra: efitrano 50 3
17 201 lalao fandosirana
18 Spotlight X: Fialana amin'ny efitrano
19 Lalao afa-mandositra: efitrano 50 2
20 Tsipika fiainana: dia mankany amin'ny tsy manam-petra
21 Lalao Haiku Games
23 RENY: Ny tranon'ny mpanao kilalao
24 Ny efitrano
Nanomboka izahay miaraka amin'ny iray amin'ireo lalao vaovao Rusty Lake, fanadihadiana mandaitra amin'ity lalao fandosirana ho an'ny Android ity ary mamerina antsika amin'ilay iray izay nanomboka saga iray manontolo. Amin'ny ankapobeny dia hahita toko 9 ianao izay afaka mankafy amin'ny iray amin'ireo traikefa fandosirana tsara indrindra ho an'ny Android. Anisan'ny voalohany nanandrana azy, avy eo zarao amin'ireo mpiara-miasa aminao.
Developer: Farihy Rusty
Rusty Lake indray, ary izany no izy tarehimarika avokoa izy ireo amin'ity karazana lalao ity, hitadiavana anay alohan'ny mpitsikilo Dale Vandermeer dia hahatsapa tsy ho ela fa ampahany amin'ny lalao hafahafa io. Miaraka amin'izany fijerena manokana ny antsipiriany sy sary izany, i Paradox dia ampahany amin'ny angano for mistery ary ho hitany izay rehetra mitranga amin'ity trano ity.
Azonao atao ve ny mandositra - Titanic
Saika tsy mila miteny na inona na inona ianao, fa raha mahita ny tenantsika eo alohan'ny Titanic isikaIza no tsy te hivoaka alohan'ny hidirany amin'ny fanambanin'ny ranomasina? Io no antsoina hoe ity lalao ity azonao atao ve ny afa-mandositra, izay mihantsy anao hahita raha afaka mivoaka miaraka amin'ireo piozila sy mistery rehetra izy amin'ny tsindrio bokotra iray amin'ny findainao. Manolotra ambaratonga 10 maimaim-poana izy io ka any aoriana dia mila mamaky ilay boaty ianao, koa mitandrema.
Varavarana ankamantatra 100 - Fialana amin'ny efitrano
Ny trano misy varavarana 100 dia miandry anao amin'ity lalao ity izay hiatrehanao piozila, ankamantatra, lalao kely, iraka, ary maro hafa mba hahafahanao mankafy traikefa lalao fandosirana mahaliana. amin'ny lohahevitra momba ny firenena toa an'i Egypt na England, dia hitondra antsika amin'ny traikefa nahafinaritra iray hahitana ity lalao ity maimaimpoana amin'ny Play Store.
Misterin'ny Escape Adventure
Haiku Games dia iray amin'ireo studio za-draharaha indrindra misy lalao fitsoahana marobe navoaka tao amin'ny Play Store. Nahazo aingam-panahy avy amin'ny angano toa ny The Monkey Island, na dia lavitra be aza izany Amin'izao lalao Lucasart rehetra izao dia mila manampy ny Detective Kate hamaha mistery famonoana olona mahazatra ianao. Tsy hoe tsy maintsy mandositra any amin'ny toerana hafa isika, fa miatrika mekanika mitovy amin'ny ankamaroan'ireo lalao efitrano fandosirana ireo. Maimaim-poana ho anao hanandrana azy izao.
Developer: Lalao Haiku
Lavitra 4: fandosirana taloha
La Làlana lavitra be ny làlana lavitra Ary milalao amin'ny fametrahana ny tenantsika amin'ilay olona voalohany izy mba hijerenantsika ny efitrano rehetra ary hahafahantsika mamaha ankamantatra na ankamantatra izay mety hivoaka avy amin'ny sarimihetsika Indiana Jones. Ary io dia betsaka kokoa na kely aza no hanananao fihetseham-po mitovy amin'izany rehefa miatrika tontolo tsy tia mandray vahiny miaraka amin'ny tontolo iasana tsara sy ny toerana tsara indrindra ianao.
Con Rusty Lake Hotel indray izahay miaraka amin'ity fianarana voalaza etsy ambony ity ary izy dia manam-pahaizana manokana amin'ireo ady amin'ny efitrano fandosirana ireo. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maimaim-poana izany, saingy manana ny vidiny ho lalao premium. Ny tanjonay dia ny fandraisana ireo vahiny hafahafa ao amin'ny hotely ary hitandrina azy ireo ho velona sy handaka mandritra ny sakafo hariva 5 izay hatolotra mandritra ny herinandro. Lalao iray niasa tsara tamin'ny sehatra hita maso miaraka amina litera tena izy.
Izay sisa rehetra: Fizarana 1
Faharoa, hitantsika ity lalao hafa ity izay efa tao amin'ny Play Store nandritra ny fotoana fohy kokoa, saingy efa naharesy mpampiasa maro. Ho fanampin'izay, hevitra mahaliana indrindra izy io. Rahalahy roa no nohidian'ny rainy tao anaty bunker. Ny andraikitsika dia ny afaka mandositra azy io, maneho ny iray amin'izy mirahalahy. Mila manangona famantarana isika, mamaha ny piozila ary mitandrina tsara amin'ny zava-mitranga rehetra. Amin'izany no hahitantsika fomba hivoahana amin'ity habakabaka ity. Ny tantara dia manana tantara tsara, sary tsara ary koa ny mozika tena tsara. Fialamboly sy fanolorana zavatra hafa.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 1,29 euro. Tsy lalao lafo vidy io, ary ho takalon'ny izany dia tsy manana fividianana na dokam-barotra ao anatiny izahay. Ka mendrika ny handoavana izany.
Developer: Lalao Glitch
Con Alien Escape dia miatrika lalao hafa amin'ny ambiny isika, indrindra amin'ny foto-kevitra, satria manana ny hetsika rehetra isika hanampiana ilay mpihetsiketsika hamela planeta feno vahiny. Hanao izany amin'ny alàlan'ny sehatra sy mekanika izay mampatsiahy antsika bebe kokoa ny lalao hetsika. Fa he, eto koa isika tsy maintsy mandositra, na dia hataontsika bebe kokoa amin'ny fahaizan'ny olona mifehy sy ny fahaizantsika. Maimaimpoana ho an'ny fahafinaretanao.
Developer: Lalao KORION
The Cube mekanika: Ny fandosirana
Miaraka amin'ny fisehoana sary miorina amin'ny sary sy saryRaha misy zavatra mampiavaka ny mekanika Cube amin'ny lalao hafa dia noho ny piozila sy fanamby maro isan-karazany atrehintsika ka tokony hanova tanteraka ny prisma isika isaky ny miatrika iray. Lalao iray tena mahaliana amin'ny lohahevitry ny sehatra sy ho an'ireo dinika izay mampiditra antsika tanteraka amin'ilay tantara.
Ny tranon'ny Da Vinci
Un lalao premium mandalo 5 euro, fa manana ny ampy hamandrihana antsika izy ary hanome antsika ny fahafinaretana mividy azy noho ny traikefa vokariny. Ary raha efa fantatsika fa hiditra ny tranon'i Da Vinci, mpamorona lehibe isika, ny tononkalo sy ny fanamby ho hitanao no ho tsara indrindra hitanao. Ary izany ve dia mandalo ny hevitry ny mpampiasa 29.000 izay nividy ny lalao tamin'ny sarany inona no olana amin'izany. Eny, io no iray amin'ireo tsara indrindra amin'ity lisitra ity ary manantena izahay fa efa nahatsapa izany ianao.
Developer: Ny lalao Brain manga sro
Lavitra 3: Fandosirana arika
Nanova ny fomba tamin'ity lalao fahatelo ity izahay teo amin'ny lisitra, zavatra izay ho hitantsika eo noho eo amin'ny sary azy. Lalao io izay tsy maintsy hamahantsika piozila mba handrosoana. Ny zavatra mahaliana dia ny ambaratonga tsirairay dia manana lohahevitra hafa tanteraka, noho izany dia tsy mankaleo mihitsy amin'ny fotoana rehetra. Misy piozila maro samihafa, ary miova ny mekanika arakaraka ny haavony. Ny sary dia manaitra ny lokony, ho fanampin'ny fiheverany tsara ny antsipiriany. Io no fizarana fahatelo amin'ny saga izay manohy mahazo eo amin'ny Play Store.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Ity dia fividianana hanesorana doka amin'ny lalao. Tsy voatery izany fa raha hitanao fa manelingelina azy ireo dia mety ho mendrika izany.
Rime - Lalao Escape
Es iray amin'ireo lalao fandosirana maimaimpoana tsara indrindra anananay amin'ny finday ary izy io dia vokatry ny fitsangatsanganana lehibe momba ny sary, ny zava-miafina ary ny fahaizany mamorona hatramin'ny voalohany. Izy io dia manana famantarana izay azo vohana amin'ny doka ary misy valiny 3 ka na dia vitanao aza izany nefa tsy mandoa denaria iray euro ianao dia azonao atomboka indray.
Mandosira ny trano be
Haavo 200 no miandry anao amin'ity lalao fandosirana ity Izy io dia iray amin'ireo alaina indrindra amin'ny Play Store ary izany dia nihaika ny sain'ny mpilalao an'arivony erak'izao tontolo izao. Amin'ny Espaniôla izy io, ary iray amin'ireo lalao ho an'ny saina liana ta hahafantatra ny zava-mitranga.
Developer: GAMEBORN Inc.
Fialana ankamantatra amin'ny efitrano fandosirana: Lalao mieritreritra amin'ny teny espaniola
Iray hafa amin'ireo Escape Room an'ny varavarana 100 izay mitondra antsika amin'ny fiaraha-miory amin'ny sary ary ny ambaratonga 100 ao aminy ho efitrano ahafahantsika mandositra. Tsy maintsy mahita zavatra miafina ianao hamahana ny lojika rehetra apetraka eo alohanao ao amin'ireo efitrano ireo.
Saribakoly efitrano fandosirana: Lalao fisainana Espaniola
Developer: Lalao Webelinx
Lalao afa-mandositra: efitrano 50 3
Con Fomba 50 isan-karazany, miatrika lalao hafa mihantsy anao hatramin'ny voalohany izahay. Ireo mpampiasa dia mampifantoka ny sary amin'ny fomba tsara amin'ny fialan-tsasatra mba hankafizany ny zavatra niainany tamin'ny mozika lavorary hamita ny efitrano tsirairay. Maimaim-poana ho anao hanandrana azy izao.
201 lalao fandosirana
Lalao fitsoahana iray hafa izay manana fahasembanana isaky ny mandeha mahavita efitrano na ambaratonga ianao dia mahazo doka. Raha afaka mitantana an'io ianao dia ho afaka hamita ny haavony rehetra raha afaka. Tsy toy ny lalao hafa izay mamela efitra vitsivitsy ho anao, eto dia anananao daholo izy ireo, fa ho takalon'ny fahitana doka.
Lalao afa-mandositra 201 - lalao vaovao vaovao 2021
Developer: Lalao TTN
Spotlight X: Fialana amin'ny efitrano
Amin'ny fijerin'ny olona voalohany, ity Spotlight X dia mandentika anao amin'ny zavatra niainanao izay tsy maintsy hijerenao ny antsipirian'ny efitrano sy ny zoro ary ny crannies rehetra. Iray amin'ireo lalao efitrano fandosirana tsara indrindra ananantsika amin'ny Android ary anananao maimaim-poana.
Lalao afa-mandositra: efitrano 50 2
Raha efa naneho hevitra momba ny fizarana fahatelo amin'ity saga ity isika teo aloha, dia miatrika ny faharoa isika ary mitovy kokoa amin'izany. Izany dia hanana efitrano 50 hafa miaraka amin'ireo ambaratonga ireo ianao miandry anao manomboka izao. Tsy hoe niasa mafy izy ireo fa kosa manome traikefa nahafinaritra ho an'ireo izay mitady lalao amin'ity fomba na sokajy ity. Afaka indray.
Tsipika fiainana: dia mankany amin'ny tsy manam-petra
Amin'ny toerana fahefatra ity lalao ity dia miandry antsika, izay an'ny saga mitovy anarana aminy, izay anananay ampahany bebe kokoa azo alaina ao amin'ny Play Store. Izy io angamba no lalao hafa indrindra amin'ny rehetra. Satria amin'ity tranga ity dia maneho olona iray isika izay manomboka mandray hafatra avy amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny alàlan'ny radio. Ny andraikitsika dia ny mitarika ity olona ity mandra-pahatongany soa aman-tsara any amin'izay alehany.Amin'ity tranga ity dia any amin'ny habakabaka izy ary tsy maintsy manampy azy hiverina isika. Ka lalao izay manome antsika fiheverana hafa noho izay mazàna ity lalao fandosirana ity matetika. Mety raha mitady zavatra original ianao. Tantara tsara, filalaovana ary sary mahafinaritra.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 3,29 euro. Tsy io no lalao mora indrindra hitantsika, fa raha dinihina ny maha-izy azy ny foto-kevitra sy ny kalitaony, dia tsy lafo loatra izany. Ka mendrika ny andramana.
Lalao Haiku Games
Efa naneho hevitra etsy ambonin'ny iray amin'ireo lalao Haiku izahay, ary ampitainay aminao ny rohy ankehitriny mba hahafahanao manana ny lisitra rehetra eo akaikinao ary afaka manandrana mifanesy ianao. Miaraka amin'ny zava-miafina sy ny asan-jiolahy, ao amin'ny lalao maro ananany no ananantsika Detective Kate manantena izahay fa hanome azy tanana hamaha izay mitranga amin'ny tantarany rehetra.
Rohy amin'ny rehetra - Sintomy ny Play Store
Lalao fandosirana hafa saingy tena hafa tanteraka amin'ireo nampianarinay anao tamin'ilay lisitra. Eto isika dia afaka milalao multiplayer miaraka amin'ny mpiara-miasa mba handosirana ny fonja miaraka amin'ny lalàna rehetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila manao fahazarana mankany amin'ny efitrano fisakafoanana koa isika, matory na mankany amin'ny gym. Ny lalao fandosirana iray manontolo dia hafa tanteraka amin'ny ambiny ary tsy maimaim-poana izany, saingy mila mandoa izany ianao.
Developer: Ekipa 17 Digital Limited
RENY: Ny tranon'ny mpanao kilalao
4,99 euro ho an'ny lalao fandosirana premium iray manontolo miaraka amin'ny sary miasa tsara ary izany dia mitondra antsika amin'ny iray amin'ireo traikefa lalao fandosirana tsara indrindra ho an'ny Android. Eto isika dia tsy maintsy mamindra izay ao anatin'ny efi-trano na efi-tranon'ny tsirairay mba hamoha ny piozila. Lalao tena marani-tsaina ary raha misy vidiny dia noho ny traikefa tsy manam-paharoa amin'ity karazana lalao ity. Fiheverana ny famolavolana toetra.
Developer: Lalao HandMade
Ity no fizarana voalohany amin'ny saga, izay ao amin'ny fizarana fahefatra ankehitriny, izay mahita fahombiazana lehibe eo amin'ireo mpampiasa Android. tangamba ny lalao fandosirana malaza indrindra eny an-tsena, ary izany dia nahatonga ny lohateny hafa tonga tao amin'ny magazay. Ny foto-kevitr'izy ireo tsirairay avy dia tsotra. Hita ao amin'ny efitrano misy karazana zavatra isan-karazany isika. Ny andraikitray dia ny famahana ny piozila, amin'ny fampiasana amin'ny tranga maro izay ao amin'ny efitrano, mba hivoahana amin'izany. Ny fahasarotana dia miovaova be, miankina amin'ny ambaratonga tsirairay. Ka mety ho fanamby tsara ho antsika izany.
Ny fandefasana ity lalao ity amin'ny Android dia mitentina 1,29 euro. Nihena ny vidiny rehefa nandeha ny fotoana, ka vidiny mirary tokoa. Ny vidin'ny ampahany hafa amin'ny saga iray ihany dia avo kokoa. Fa ny zava-misy dia mendrika azy rehetra izy rehetra.
Developer: Lalao Fireproof
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao fitsoahana 24 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny lalao ara-panatanjahantena 10 tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana 10 fandrefesana lavitra indrindra ho an'ny Android